I-TÜBİTAK yeeNqwelo moya eziHydrogen kunye noMbane | RayHaber | raillynews
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara41 KocaeliI-TÜBİTAK ephuhlisiweyo yeHydrogen kunye neemoto zombane
22 / 01 / 2020 41 Kocaeli, JIKELELE, Highway, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, automotive, ETURKEY
I-Tubitak iphuhlise imoto ye-hydrogen kunye neyombane
I-TUBITAK MAM kunye ne-National Boron Research Institute (BOREN) basebenze kunye ekuphuhliseni inqwelo-mafutha entsha yasekhaya enikwe ipetroli yi-hydrogen ipetroli kwaye yavelisa iiyunithi ezi-2.
Isithuthi esiphuhlisiweyo sinenjini ye-hybrid, inokuhamba iikhilomitha ezingama-300 ngombane kwaye ububanzi bayo bonyuswe ngeekhilomitha ezili-150 nge-hydrogen ipetroli.
Isebenzisa i-boron njengomgibe we-hydrogen emotweni. Isithuthi, esisebenza ngokuzola okukhulu, sinamaxabiso okukhutshelwa zero kwaye sakhawuleza saya kwiikhilomitha ezili-100 ngexesha elifutshane kakhulu. Isithuthi sidla ngokupakishwa isithuthi sombane kwaye sisebenzise i-hydrogen ipetroli xa kufuneka uluhlu olongezelelweyo.
Ndivuyisana nemibutho yethu, i-TÜBİTAK MAM kunye ne-National Boron Research Institute (BOREN) kwaye ndinqwenela ukuba baphumelele.
Malunga neTÜBİTAK MAM
'' Yasekwa ngo-1972, I-TÜBİTAK Marmara iZiko loPhando (i-MAM) iyaqhubeka nemisebenzi yayo kwi "TÜBİTAK Gebze Campus" eKocaeli. Eli ziko, elijolise ekubeni liziko lenkokheli lehlabathi elivelisa isayensi kunye netekhnoloji kwaye yamkele njengoxanduva lokuvelisa izisombululo ezizinzileyo, ezinobuchule, ezenzululwazi nezobuchwephesha ngokwenza uphando olwenziweyo, phakathi kweziko, iZiko lezeNdalo kunye noCoceko lokuCoca, iZiko lezaMandla, ubuNjineli beMvelo kunye neZiko leBiotechnology Kukho iZiko lokuTya, iZiko leTekhnoloji yeChemical, iZiko leMathiriyeli kunye neZiko leMhlaba kunye neeNzululwazi zasemanzini. ''
I-TÜBİTAK MAM, enye yeenkampani ezikhokelayo kwihlabathi lobuchwepheshe obuphambili kunye nobuchule bokuphanda kunye namandla, izibonelelo zophando, ukulawula i-standard standards kunye neenkqubo zokusebenza, unikezela izisombululo ezizimeleyo kumaziko karhulumente, okhuseleko kunye namaziko abucala kunye neendlela ezijoliswe ngabaxhasi. Ezi zisombululo zifunyenwe ngophando olusisiseko, uphando olwenziweyo kunye nophuhliso, ukuhanjiswa kwethekhnoloji, innovation, isakhiwo kunye nesakhiwo sokwakha, umgangatho wesizwe kunye nesimiso sesigxina, ukucebisana kweengcali kunye nokuqeqeshwa kwemisebenzi.
Malunga neZiko leSizwe loPhando nge-Boron
National Iboron Research Institute (Boren), eTurkey ububanzi yokusetyenziswa ngemveliso yeboron kunye nobuchwepheshe ehlabathini, ngemveliso yeboron entsha mveliso kunye nophuhliso ukuqinisekisa ukuba zibonelela indawo yenzululwazi ezifunekayo ukuze abasebenzisi uphando kwiinkalo ngeenkalo ezahlukeneyo, boron kusetyenziswa kunye iimveliso kunye / okanye uphando ukwenza kule ndawo Yasekwa kunye noMthetho Nomb. 4 we-6/2003/4865 ukuze kuqhutyekwe nophando lwenzululwazi, ukuze kwenziwe, kulungelelaniswe kwaye kufakwe igalelo kolu phando ngokubambisana namashishini abucala naworhulumente. Imisebenzi kunye nombutho we-BOREN, eliziko elinxulumene ne-Ofisi yoMphathiswa wezaMandla kunye neMithombo yezeNdalo kwiRiphabliki yaseTurkey, laphinda lacwangciswa kwiCandelo lama-15 lesiGqibo sikaMongameli iNombolo 7 yomhla we-2018/4/48.
I-BOREN, eyaqala imisebenzi yayo ngo-2004, isebenze kwisebe elabelwe ngaphakathi kwiLebhu yeLabhoratri yeYunivesithi yaseMbindi Mpuma kude kube ngu-2007. Ukusukela ngalo mhla, I-BOREN, esebenza kumgangatho we-166 wekhampasi yaseDumlupınar Boulevard, Hayi: I-10 Çankaya / ANKARA, eyeyesebe lezamandla kunye nezendalo, yathuthela kwisakhiwo sayo senkonzo e-D-Blok ngomhla we-08/07/2019. . Ukongeza, iyaqhubeka nemisebenzi yayo kwilabhoratri nakwiindawo zokuvavanya ngaphakathi kwiZiko le-B&EN R&D elikufutshane nesakhiwo senkonzo.
I-BOREN iqhuba kwaye ixhasa iiprojekthi kunye neenkqubo kwicandelo le-boron ngokubonelela ngokubambisana kunye nolungelelwaniso kwicandelo elifanelekileyo loluntu kunye ne-R & D kunye nemibutho yecandelo lezemveliso, ukuqhuba nokupapasha inzululwazi kunye nemisebenzi enxulumene boron kunye nokwenza imisebenzi yorhwebo lweemveliso boron.
Qha ga mshelana Ilhami ngqo
I-China ivelisa i-trolley ehamba nge-hydrogen (iVidiyo)
Umzila ogqithiseleyo kunye nombane osebenza ngamandla kagesi e-Afrika
USihlalo uAktas, i-100 Percent Tested Electric Electric Running
I-Hydrogen Train Eyaziwayo kwiMathandathu aseJamani aseMerika
I-National Boron Research Institute